ISIOKWU ND OF DT N'IME - Geofumadas
A na-ewu nke a, iji tọọ isiokwu kachasị na Blog; ọ bụ ezie na na post a ị nwere ike ịhụ nke depụta ihe omume niile a tụlere Geofumadas.
Usoro na AutoCAD
Mmekọrịta na Excel
Mmekọrịta na GIS
Ọzụzụ na akwụkwọ ntuziaka
Ihe ndị ọzọ AutoDesk
Debe ihe ndozi
Jiri ndị ọzọ tụnyere
Mmekọrịta na CAD
Ijikọta na Google
Foto ndị na-ese onyinyo
Jikọọ na GIS
Jikọta na CAD
Mkpebi nke Google Earth
Mmemme yiri nke ahụ
Atụmatụ maka Cadastre
Usoro na Microstation
Ihe ndị ọzọ Bentley
Esi eme ya
Banyere nnukwu GIS
Ihe edere aha ya
Otu esi eme ya na gvSIG
Ọzụzụ na ọmụmụ ihe
Usoro na teknụzụ
Ewelite na akụrụngwa
GPS na EQUIPMENT
Na-enyocha iji AutoCAD
Na-enyocha iji Microstation
Nyocha akwụkwọ na ọmụmụ ihe
Ngwakọta Ngwá Ọrụ
Jiri GPS na mobile
15 na-aza "Ihe ndekọ nke ọdịnaya"
Anonymous kwuru, sị:
N'uhuruchi, ị nwere ike ịgwa m ebe m nwere ike ịnweta osimiri na ụzọ nke Honduras. Ma ọ bụ na ha sitere na peeji ndị na-aga n'ihu yana site na mbibi nke ICF.
siri ike na. Ha nwere ike ịnọ ebe ọ bụla na mba niile.
CESAR kwuru, sị:
BỤP, m na-arụ na-amụrụ na-EGOSIPỤTA GEOMATICA, ME nyere efe n'elu foto sii GOOGLE ụwa, ma mara ọnọdụ gị, ndị na-na mgbakwunye MEXICO, AS unu nwere chọta ọnọdụ gị?
Héctor Donato Montañez kwuru, sị:
Achọrọ m ime ka ị mara na ị werela ụzọ nzuzo dị na Calle Pedro Echagüe Oeste N ° 149 na nke a na-agwa Calle Sarmiento Norte ebe enwere ọnụ ụzọ nzuzo, saịtị a dị na obodo San Juan - Isi Obodo nke ógbè San Juan, Argentina. Eziokwu ahụ bụ na o nweghị ọnụ ụzọ ámá Pedro Echagüe kwuru adịghị egosi na ọ bụ ọha na eze. N’ihi ya, m na-arịọ ka e buru ụzọ kpachara anya iji chọpụta ma ihe m na-ekwu ọ bụ eziokwu ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, a na m arịọ ka ehichapụ ihe onyonyo gbasara mgbasa.
Na ndebiri ederede. N'ime akụkụ dị elu bụ njikọta.
Alfredo kwuru, sị:
otu esi emegharia ndepụta nke nhazi nhazi nke ala
I kwesiri ibu ihe karia.
N'ozuzu, ị ga-ekenye usoro nhazi,
mgbe ahụ, ị ​​ga-ebuga ya na ebe a ma ama, ma gbanwee ya ma achọọ ya.
Dee editọ anyị (na) geofumadas. com na anyị ga-akọwa ihe zuru ezu.
M nwere ike refernciar ka a DXF file na-adịghị na ya onwe ya nrụtụ na a ahazi etiti? M na-eche na MicroStation ọzọ bụ fácil..pero adịghị amasị ..
Enwere m ajụjụ, dị ka m na-eme iji chọpụta ụkpụrụ na-ezighị ezi na-abaghị uru dị ka ọnụ ọgụgụ nhazi dị n'ogo.
Ọ bụrụ na ị na-ekwu banyere iwu Honduran:
- Ka e were ya na ha na-amalite nnyocha nyocha nke obodo obodo n'ime afọ abụọ: Olee ụkpụrụ ha ga-etinye? Ọ bụrụ na ha nwere ụkpụrụ ma kwenyeghi, ha ga-etinye 100%.
Ihe ha kwesịrị ilekọta bụ nrụzi dị mma nke Ụlọikpe Kachasị Elu, nke, ma ọ bụrụ na ha anaghị egosi ndekọ na nchebe ahụ abanyela, nwere ike ịchọ ka ha kwụọ 100%.
Nkwekọrịta ahụ na-arụ ọrụ, nke mere na mmetụta ahụ adịghị elu, mgbe a na-akọwapụta cadastre.
Akụkụ nke ọzọ, bụ ụdị kristal nke ụkpụrụ bụ ihe ha na-azọrọ na ha nwere? Ọ bụ nke ụlọ, na ọnụahịa ndị dị ugbu a? Ọ gụnyere iwu ndị obodo ukwu? Ọ na-agụnye ụkpụrụ ala ala na mkpụrụ na-adịgide adịgide?
Ọ bụrụ na ha bụ akwụkwọ ndekọ aha ọhụrụ, na-enwe ọhụụ. Itinye ha na 100% ga-enwe mmetụta na-adịghị mma, n'ihi na ndị mmadụ, ọ bụrụ na ejiri naanị ya kwụọ ụgwọ, ma ọ bụ na-akwụbeghị ụgwọ ọ bụla, ga-enwe mmasi ike. Nke a kama irite uru, ga-abawanye nke ndabara, maka na ndị mmadụ ga-abịa naanị ime obodo ka ha hụ mgbe ha kwesịrị ịkwụ ụgwọ, yana mgbe ha matara uru ọ ga-agbagharị.
Yabụ, ihe ịhazi dị mkpa. Ha abuo ịkwado n’ihu TSC ihe omume emebela emepe emepe, ka ha mee ka ihe ndi mmadu ghara imezu.
Yaredi Harobi Mejia Paredes kwuru, sị:
N'ime ụfọdụ obodo anyị nwere katalọgụ nke ụkpụrụ 2015-2019 afọ ise, agbanyeghị na nyocha Urban teknụzụ, ọ ga-abụ ihe ziri ezi maka Ngalaba Cadastre ịmalite usoro nkwekọrịta nke ụkpụrụ ndị a ma ọ bụ ihe ga - abụ usoro kacha mma ị ga - eme, na Rural dị ka 30% nke nyocha oru, ihe ị ga-eme n'ọnọdụ dị otú ahụ.
LUIS ARMANDO ROJAS kwuru, sị:
Morningtụtụ ọma, ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ, nwere mmasị inweta drone, ya na igwefoto multispectral na foto, gụnyere ngwanrọ maka atụmatụ ụgbọ elu na nyocha onyonyo, nke na-enye ohere nyocha nke ahịhịa na anụ ụlọ site na iji UAV Ọ mara ozugbo ọnọdụ nke ala dị iche iche na ebumnuche iji melite arụmọrụ ha, na-atụle njikwa nke ụmụ ahụhụ na ụdị ụdị ịgba mmiri.
Ọ ga-amasị m ịnweta nkwenye gị
Ha nwere a na-eme na-emetụta a CAD na-eru na akara nrutu polylines ma ọ bụ AutoCAD ma ọ bụ MicroStation ma.
Gachuz kwuru, sị:
M na-ewepụta google hearth kml ya na ihe nhazi utm (isi 20) na njirimara maka nhazi ọ bụla, ID8L980G 20.408165 -99.36207333 (njirimara, latitude, longitude), a na-emepụta faịlụ kml na utm 8L980G mpaghara 14 Q 462223.62 m E 2256691.52 Mana mgbe a na-atụgharị ya ka ọ bụrụ dwg autocad ọ na - enye m data abụọ dị iche iche n'otu akụkụ njirimara ma n'aka nke ọzọ ọ na - enye m isi ihe, gịnị na - eme ??????